အခမဲ့ Instagram နောက်လိုက် | အခမဲ့ Instagram ကိုနှစ်သက်
Targeted & Organic Instagram Growth ကိုဝယ်ပါ
Hashtags သုတေသနနှင့်ပရိုဖိုင်း Optimization ဝန်ဆောင်မှု
အလိုအလျောက် Instagram နောက်လိုက် Buy
ယူအက်စ်အေ / ယူကေ Instagram နောက်လိုက်များကိုဝယ်ပါ
အလိုအလျောက် Instagram ကြိုက်နှစ်သက်ပါ
IGTV Likes ကိုဝယ်ပါ
Instagram Reels Views ကိုဝယ်ပါ
Instagram Impressions & Reach ကိုဝယ်ပါ
IGTV Views ကိုဝယ်ပါ
Instagram Package သဘောတူညီမှုကိုဝယ်ပါ
အခမဲ့ Instagram ကိုနောက်လိုက်
Facebook Video Views ဝယ်ပါ
Facebook Fan Page Likes ကိုဝယ်ပါ
တိုက်ရိုက် Twitch ကြည့်ရှုသူများကို ၀ ယ်ပါ
TurboMedia.io သည်အရည်အသွေးမြင့်သည့် Instagram နောက်လိုက်များနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများအားလျင်မြန်စွာနှင့်ဘေးကင်းစွာရရှိရန်သင်၏လွယ်ကူ။ ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏တစ် ဦး ချင်းဖွံ့ဖြိုးမှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအကောင်းဆုံးနှင့်ပေးဆောင်ရသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
အခမဲ့ Instagram ကိုနောက်လိုက် & Likes ရယူပါ
အခမဲ့ Instagram သုံးစွဲသူများနှင့်အကြိုက်များရယူခြင်းသည်လွယ်ကူပါသည်။
စက္ကန့် ၃၀ မှ ၆၀ အတွင်းပြုလုပ်ပါ။
ဘာကြောင့် TurboMedia.io ကိုသုံးရသလဲ။
TurboMedia.io သည်သင့်အားလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူလက်ခံရယူနိုင်မည့်ဆန်းသစ်သောကွန်ယက်တစ်ခုကိုပေးထားသည် 10 အခမဲ့ Instagram ကိုနောက်လိုက် နှင့် 10 အခမဲ့ Instagram ကို Likes ၄၈ နာရီတိုင်း ငွေပေးချေခြင်းအစီအစဉ်များကိုရရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်အခမဲ့အစီအစဉ်များသည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။ သင်၏ Instagram ပရိုဖိုင်းအချက်အလက်ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာထားရှိရန်စကားဝှက်မလိုအပ်ပါ။
TurboMedia.io ကိုလူသားများတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မင်းရဲ့အချိန်ကအရေးကြီးတယ်၊ ငါတို့နားလည်တယ်။ အခမဲ့နောက်လိုက်များနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများရရှိရန်အတွက်စက္ကန့် ၃၀ မှ ၆၀ အတွင်းစစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူမှုရေးလုပ်ရပ် ၅ ခုကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးပြီးပါပြီ။ သင် activate လုပ်သော service ကိုချက်ချင်းလက်ခံရရှိပြီး ၄၈ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခမဲ့ (သို့) ငွေပေးချေသည့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုသင်စတင်လုပ်ဆောင်ပါကသင်၏နောက်လိုက်များကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းတိုးပွားလာသည်။ အခမဲ့အစီအစဉ်ကို ၄၈ နာရီတိုင်းတွင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပါသို့မဟုတ် ၁၀၀% အလိုအလျောက်ငွေပေးချေသည့်အစီအစဉ်ကိုဖွင့်ပါ။ လခပေးသောအစီအစဉ်ကိုဖွင့်ပြီးအပတ်တိုင်းနောက်လိုက်များအားအလိုအလျောက်လက်ခံပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင်ပြုလုပ်သော post အသစ်တိုင်းကိုနှစ်သက်သည်။
အခမဲ့နှင့် Paid Options ကို
ပစ်မှတ်ထား Profiles 10 ကိုလိုက်နာပါ
1x တိုင်း 48 နာရီကိုသက်ဝင်
နောက်လိုက်များ၊ bot များမရှိ!
ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်သည်အများပြည်သူရှိရမည်
နောက်လိုက် ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀) နောက်လိုက် ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀) နောက်လိုက် ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀)
တစ်နေ့လျှင် 15 နောက်လိုက်ရ
ပစ်မှတ်ထား Profiles0ကိုလိုက်နာပါ
Plan ကို 100% မှာ Automatic
20 ပို့စ်တွင် Likes 1 ရရှိ
သငျသညျ 1 နာရီတိုင်း 48x Activate
25 Likes (ဒေါ်လာ ၁၃.၅၀) 50 Likes (ဒေါ်လာ ၁၃.၅၀) 100 Likes (ဒေါ်လာ ၁၃.၅၀) 200 Likes (ဒေါ်လာ ၁၃.၅၀) 500 Likes (ဒေါ်လာ ၁၃.၅၀) 1000 Likes (ဒေါ်လာ ၁၃.၅၀)
Post ကိုတစ် ဦး လျှင် Likes 25 ရရှိ
အခမဲ့ Instagram နောက်လိုက်များကိုရယူပါ
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီတွင် Instagram သည်လစဉ်အသုံးပြုသူတစ်ဘီလီယံနီးပါးရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်အရေအတွက်များပြားလာခြင်းနှင့်အတူ Instagram သုံးစွဲသူများအလျင်အမြန်တိုးပွားလာခြင်းကပလက်ဖောင်းမည်မျှအထိရောက်ရှိသွားသည်ကိုသာပြသသည်။ ယနေ့ Instagram သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လူမှုမီဒီယာလွှမ်းမိုးသူများအတွက်ငွေရှာသည့်အဓိကစက်ယန္တရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာထက်များစွာပိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်များစွာသောလူများအတွက်လက်တွေ့ကျသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ သြဇာအရှိဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများသည်တစ် ဦး လျှင်တစ်သန်းလျှင်သန်းပေါင်းများစွာပြုလုပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျန်ရစ်သင့်သနည်း။ Instagram မှအစစ်အမှန်ငွေရှာခြင်းမပြုမီသင်၏ပုံရိပ်ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မွေးမြူရန်ကြိုးစားရမည်။ Instagram မှတစ်ဆင့်မည်မျှလျင်မြန်စွာနှင့်မည်မျှငွေမည်မျှ ၀ ယ်သည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အချက်များအနည်းငယ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏တန်ဖိုး၊ သင်၏သင်ကမ်းလှမ်းရန်နှင့်လူမည်မျှသည်သင့်အားယုံကြည်စိတ်ချပြီးဖြေရှင်းနည်းများအတွက်သင့်ထံချဉ်းကပ်သည်တို့ပါဝင်သည်။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်အသားကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်နှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေခြင်းသည်သင်၏အဓိကတာဝန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏နောက်လိုက်အရေအတွက်ကိုလျှင်မြန်စွာတိုးပွားရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။ အခမဲ့ Instagram နောက်လိုက်များနှင့်ပေးဆောင်ရသောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုရယူရန်ရွေးချယ်စရာများသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဤ post တွင် Insta နောက်လိုက်များသင့်အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမည်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado မရှိရင်အဲဒါကိုထဲထဲဝင်ထည့်လိုက်ကြပါစို့။
Instagram တွင်အားထုတ်မှုသည်နည်းလမ်းများဖြစ်ပြီးငွေသည်အဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Instagram နောက်လိုက်များများများလာရင်အဲ့ဒီကိုရောက်မှာပဲ။ သင်၏နောက်လိုက်အရေအတွက်တသမတ်တည်းမြင့်တက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်မြင်တွေ့ရမည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သင့်ထုတ်ကုန်အတွက် လက်ခံသူပိုများသည်- သင်ကမ်းလှမ်းရမည့်အရာသည် သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကြားတွင် လူအများအပြားကို မရရှိပါက အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာများစွာကို ဖန်တီးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ နောက်လိုက်များ ပိုများလာသဖြင့် သင့်တွင် သင့်အကြောင်းအရာကို မျှဝေရုံသာမက သင့်ထုတ်ကုန်များကိုလည်း ဝယ်ယူမည့်သူများ တသမတ်တည်း တိုးပွားလာသော စီးကြောင်းတစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမြတ်အစွန်းအရှိဆုံး Instagram နယ်ပယ်အချို့တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်း၊ အလှအပ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကြံ့ခိုင်မှု၊ ဖက်ရှင်၊ မိဘအုပ်ထိန်းမှု၊ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ စီးပွားရေး၊ အစားအသောက်၊ ဓာတ်ပုံနှင့် တေးဂီတတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာ Jane Selter ကို ကြည့်ပါ။ Instagram မှာ Follower 12 သန်းကျော်ရှိတဲ့ Fitness Model ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလုံးစုံကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် Instagram မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ပုံတစ်ပုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Jane သည် တစ်စုံတစ်ခုကို စိတ်အားထက်သန်သူ (သူမ၏ အခြေအနေတွင်၊ ကြံ့ခိုင်မှု) ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဥပမာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ စိတ်တူကိုယ်တူ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မျှဝေရန် သူမ၏အချိန်ကိုလည်း အသုံးပြုနေပါသည်။ Instagram ၏ အကျော်ကြားဆုံးသော ကြံ့ခိုင်မှုမော်ဒယ်များထဲမှ တစ်ဦးသည် တစ်ချိန်က ရုပ်ရည်အပေါ် အခြေခံ၍ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်း စိတ်ကူးကြည့်ရန် ခဲယဉ်းပါသည်။ ယနေ့တွင်၊ Selter သည် သူမ၏ အခပေး ကြံ့ခိုင်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် Instagram မှတဆင့် လှလှပပ ဝင်ငွေရရှိနေကာ နေ့ရက်တိုင်းတွင် သူမ၏ followers များကို အမြဲထည့်နေပါသည်။
Insta's Explore စာမျက်နှာတွင် သင်ပါဝင်နိုင်သည်- သင့်နယ်ပယ်တွင် သင့်ကိုယ်သင် နာမည်တစ်ခုဖန်တီးပြီး သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နောက်လိုက်တစ်ခုရှိသောအခါ၊ သင့်ပို့စ်သည် Instagram ၏ Explore စာမျက်နှာတွင် ပေါ်လာနိုင်သည်။ Instagram Explore တွင် သင့်တွင် follower မည်မျှရသင့်သည်ဟူသော ခက်ခဲမြန်ဆန်သော စည်းမျဉ်းမရှိသောကြောင့် 'လျောက်ပတ်လုံလောက်သော' ဟူသော ဝေါဟာရကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနေပါသည်။ Instagram ၏ Explore စာမျက်နှာကို 2019 ခုနှစ် မေလတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ သုံးစွဲသူများက ၎င်းတို့ကြည့်ရှုလိုသည့် အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်စေမည့် လမ်းညွှန်ဘားတစ်ခုပါရှိသည်။ ရွေးချယ်စရာများတွင် Insta ၏ကိုယ်ပိုင်ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည့် IGTV သည် ရှည်လျားသောပုံစံဗီဒီယိုများ (တစ်မိနစ်ပေါင်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်) နှင့် Shop – Instagram စျေးဝယ်ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည်။ IGTV နှင့် Shop တစ်လျှောက်တွင် သုံးစွဲသူများသည် အကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန် ခေါင်းစဉ်ချန်နယ်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ niches တွေပါ။ ဥပမာ၊ သင့် Instagram အကောင့်က အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်၊ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေနေတဲ့ သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ရဲ့ Explore စာမျက်နှာမှာ သင့်ကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ Instagram Explore တွင် အထူးအသားပေးဖော်ပြခြင်းဖြင့် သင့်ချန်နယ်ကို သင်တည်ရှိနေကြောင်းနှင့် သင်ကမ်းလှမ်းပေးရမည့်အရာများကို တစ်ခါမျှပင်မသိသော အသုံးပြုသူများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ Instagram သည် Explore တွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို ကြော်ငြာများဝယ်ယူခွင့်ပေးထားပါသည်။ ဝယ်ယူထားသော ကြော်ငြာများကို Explore feed ကိုယ်တိုင်တွင် မပြသသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဝဘ်ဆိုက်အသွားအလာကို တိုးမြှင့်ပါ- သင့်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၎င်း၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်မှ အဓိကလုပ်ဆောင်နေပါက၊ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို စျေးကွက်တင်ရန်အတွက် Instagram ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် သင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ လွယ်ကူသော အဆင့်အနည်းငယ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုသည့် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဘလော့ဂ်များနှင့် ဆောင်းပါးများစွာကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ၎င်းတို့တွင် သင့်လုပ်ငန်းဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သင်၏ Instagram ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့် သင့်တင်ထားသော ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများအားလုံးတွင် လင့်ခ်ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် သင့်တွင် Follower လုံလောက်စွာမရှိပါက Instagram သည် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဟု သင်မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Instagram တွင် အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာများကို ပုံမှန်တင်သော်လည်း နောက်လိုက်အသစ်များစုဆောင်းရန် ရုန်းကန်နေပါက၊ အခမဲ့ Instagram နောက်လိုက်များကို ရရှိစေမည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် အကောင့်ဖွင့်ပါ။ သင့်နောက်လိုက်အရေအတွက် မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်လည်း တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုက်အသွားအလာ တိုးလာနေချိန်တွင် သင်ရောင်းချနေသည့်အရာများကို လူများဝယ်ယူမည်ဟု အာမခံချက်မရှိသော်လည်း ၎င်းသည် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို များစွာလိုအပ်နေသော မြင်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်သည် မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုံလောက်အောင် ကြိုးပမ်းပါက၊ ပေါင်းစပ်ရလဒ်များသည် အပြုသဘောဆောင်နိုင်ပါသည်။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို Instagram တွင်သာမက Google၊ Yahoo နှင့် Bing ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများတွင်လည်း ပိုမိုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
YouTube ပေါ်တွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါ- YouTube သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗီဒီယိုအခြေခံဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး သင်သည် YouTuber ဝါသနာပါသူဖြစ်ပါက၊ သင်သည် YouTube ပေါ်တွင် သင့်အရာများကို လုပ်ဆောင်နေရုံဖြင့် မရပါ။ Instagram ပရိုဖိုင်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၎င်းကို တက်ကြွစွာ အသုံးပြုရန် မမေ့ပါနှင့်။ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွက် သင်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့၊ သင်၏ Insta bio တွင် သင့် YouTube ချန်နယ်လင့်ခ်ကို ကူးထည့်ကာ သင်၏ မကြာသေးမီက တင်ထားသော YouTube ဗီဒီယိုလင့်ခ်ကို ဆက်လက်မွမ်းမံနေပါသည်။ YouTube နှင့် Instagram တစ်လျှောက်တွင် သင်၏ ပေါင်းစပ်လိုက်စားသူများနှင့် စာရင်းသွင်းသူများထဲတွင် အများအပြားရှိနိုင်ပါသည်။ Instagram မှာ သင့်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်၏ Instagram bio ရှိ သင့် YouTube ဗီဒီယိုများနှင့် ချန်နယ်အသေးစိတ်များ အပါအဝင် လက်ရှိ Instagram လိုက်စားသူများကို သင့် YouTube ချန်နယ်သို့ ဦးတည်သွားစေမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့မြင်တာကို သဘောကျရင်၊ YouTube မှာ စာရင်းသွင်းသူတွေနဲ့ ကြည့်ရှုမှုတွေ ပိုများလာမယ်၊ အဲဒါက အချိန်ပြည့် YouTuber ဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာစေပါလိမ့်မယ်။ ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးမှာ တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရင် ဆုလာဘ်တွေ ပိုပေးပါလိမ့်မယ်။ YouTube နှင့် Instagram နှစ်ခုလုံးမှ ကျန်းမာသောငွေများရရှိရန် စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲ မဟုတ်လား?
အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး ဆုလာဘ်များကို ရယူပါ- Instagram တွင် မြင်သာထင်သာမြင်သာမှုကို စတင်ရရှိသောအခါတွင်၊ သင့်နယ်ပယ်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများသည် သင်နှင့် ပူးပေါင်းလိုမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုများအကြောင်း နည်းပါးလာပြီး ၎င်းသည် အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းနှစ်ခု/တစ်ဦးချင်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အချင်းချင်း၏အောင်မြင်မှုများနှင့် အောင်မြင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောအခါတွင် အခြားသူတစ်ဦးကို နှိမ့်ချခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။ ခရီးသွား vlogger များနှင့် ခရီးသွား vlogger များ၊ ဂီတသမားများ၊ အနုပညာရှင်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ Instagram သည် အခွင့်အလမ်းများစွာကို တံခါးဖွင့်ထားသည်မှာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းကို မြှင့်တင်ပြီး သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ထုတ်ပြရန် အာရုံစိုက်ရပါမည်။ သင့်တွင် Follower ပမာဏ မျှတပြီးပါက၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အခြားအမှတ်တံဆိပ်များကို သင်ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ သင်၏ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို လက်ခံမည်မဟုတ်သော်လည်း အချို့မှာ ပြေလည်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာဖယ်ရှားပါက ၎င်းတို့သည် သင့်နောက်လိုက်အရေအတွက်ကို ပိုမိုမြင့်မားလာစေနိုင်သည်။ သင်သည် 'ဆိုရှယ်မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူ' အဆင့်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများထံမှ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုမှုများကို သင်မျှော်လင့်နိုင်ပြီး သံသရာသည် ဆက်လက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူအနေဖြင့်၊ ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အခြားသော niches များမှ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စွမ်းအားလည်း ရှိပါသည်။ မင်းရဲ့နယ်ပယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် ဂီတပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Instagram တွင် 'သြဇာလွှမ်းမိုးသူ' အဆင့်အတန်းကို ရရှိစေရန် စီမံပါက၊ သင်ကစားသည့် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် အမှတ်တံဆိပ်များထံ သင်ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ ဂစ်တာတီးသူသည် ဂစ်တာနှင့်/သို့မဟုတ် အသံချဲ့စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပူးပေါင်းနိုင်သည်၊ တေးသံရှင်သည် မိုက်ခရိုဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားအရာများနှင့် ပူးပေါင်းနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်အတွက် Instagram ကိုအင်္ဂါရပ်များ
သင်၏ Instagram စာမျက်နှာစတင်သတိပြုမိလာသည်နှင့်သင်နောက်လိုက်များများလာသည်နှင့် Instagram Instagram နောက်လိုက်များပိုမိုရှာဖွေရန်ထူးခြားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်များ၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရသော်လည်း၊ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လက်လှမ်းမမီမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် Insta တွင်ထည့်သွင်းထားသောကိရိယာများကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်ဓာတ်ပုံဝေမျှသည့်အင်္ဂါရပ်များအပြင် Instagram သည်အောက်ပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဂုဏ်ယူသည်။
IGTV ကိုငါတို့အရင်ကဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတယ်၊ ပုံမှန် Instagram app သည်တိုတောင်းသောဗွီဒီယိုပို့စ်များကိုသာခွင့်ပြုသည်။ သာမန်တိုတောင်းသောဗီဒီယိုတင်ခြင်းအင်္ဂါရပ်အပြင်စင်မြင့်မှကမ်းလှမ်းသောအခြားဗွီဒီယိုအင်္ဂါရပ်နှစ်မျိုးမှာ Live ဗီဒီယိုများနှင့်ပုံပြင်များပါ ၀ င်သည်။ Live video feature သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားစစ်မှန်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည် - တစ်နေ့တာနှင့်အမျှပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နယ်ပယ်များတစ်လျှောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏နောက်လိုက်များအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီသင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဗွီဒီယိုတိုက်ရိုက်လွှင့်တိုင်းသင်နောက်လိုက်များအားအသိပေးလိမ့်မည်။ ပလက်ဖောင်းသည်မကြာသေးမီက၎င်း၏တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစွမ်းရည်ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီးယခုအခါအသုံးပြုသူနှစ် ဦး သည်သီးခြားကိရိယာနှစ်ခုမှတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ Live အင်တာဗျူးများမှသည်ထုတ်ကုန်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းခြင်းအထိဖြစ်နိုင်ချေများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Instagram ၏ algorithm သည်သင့်အတွက်အဆင်ပြေပါကသင်၏ live video သည် Instagram Explore စာမျက်နှာရှိ“ Top Live” ဗီဒီယိုများသို့ပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသင်၏ဗီဒီယိုကိုကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ Insta အသုံးပြုသူများကြည့်ရှုနိုင်ပြီးနောက်လိုက်အရေအတွက်တိုးပွားလာရန်အခွင့်အလမ်းများသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ ၁၀ စက္ကန့်ပုံရိပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ၁၅ စက္ကန့်ကြာဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့် 'Stories' အင်္ဂါရပ်လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လွှမ်းမိုးသူများကသူတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်တင်ထားသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏နောက်လိုက်များအားအဆင့်မြှင့်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သောစွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ Instagram က 'Stories' feature ထဲမှာ product tagging ကိုလည်း enable လုပ်ထားတယ်။ ဆိုလိုတာကသင်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကိုသင်၏ Stories တစ်ခုမှာပြမယ်ဆိုရင်အဲဒါကို tag လုပ်လို့ရပါတယ်။ ၎င်းကို ၀ ယ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောနောက်လိုက်များသည်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ကို နှိပ်၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများမျှဝေခြင်းအပြင် Instagram တွင်သင်ကမ်းလှမ်းသည့်အရာကိုမြှင့်တင်ရန်ကြော်ငြာများလည်းတင်နိုင်သည်။ သင့်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သောကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုရှာဖွေရန်သင်စမ်းသပ်နိုင်သောချိန်ညှိချက်များအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်၏စာမျက်နှာရှိရှိပြီးသားအကြောင်းအရာများကိုပင် Instagram Ads အင်္ဂါရပ်ဖြင့်ကြော်ငြာများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Instagram တွင်ကြော်ငြာများကိုဖန်တီးရန်နှင့်စီမံရန် Instagram ကို Facebook ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့် Facebook ၏ကြော်ငြာမန်နေဂျာကိုအသုံးပြုရမည်။
Instagram သုံးစွဲသူများသည် push notifications များကို enable လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့နောက်လိုက်သည့်စာမျက်နှာများသည်ဓာတ်ပုံအသစ်များ၊ ဗီဒီယိုများစသည်တို့ကို upload လုပ်သည့်အခါ၎င်းတို့အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ဤ feature ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏လက်ရှိနောက်လိုက်များအားအရေးယူရန်တိုက်တွန်းရမည်။ သင်၏ပို့စ်များကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆိုမှုများ၊ သင်၏နောက်လိုက်များအားသင့်ရုပ်သံလိုင်းအတွက် push အသိပေးချက်များကိုဖွင့်ရန်ပြောပါ။ သင်၏နောက်လိုက်များအားလုံးကသင်၏ခေါ်ဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းအချို့မှာမူဖြစ်သည်။ သင်တင်ထားတာကိုသူတို့ကြိုက်ရင်သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ၊ နောက်လိုက်တွေနဲ့မျှဝေပါလိမ့်မယ်။ Push အကြောင်းကြားစာများသည် Instagram ပေါ်တွင်ပိုမိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမဟုတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအကူအညီဖြစ်နိုင်သည်။ ကောက်ချက် ယခုတွင် Instagram သုံးစွဲသူများသည်သင်နှင့် Insta ၏အင်အားအရှိဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုမည်သို့အကျိုးပြုနိုင်ကြောင်းယခုသင်သိပြီ။ နောက်တစ်ဆင့်နောက်လိုက်များမည်သို့ရရှိမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နည်းလမ်းအားလုံးအားဖြင့်သင်ဟာအော်ဂဲနစ်လမ်းကြောင်းကိုသွားပြီး 'Follow' ခလုတ်ကိုမနှိပ်ခင်လူတွေကိုသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်တယ်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည်အချိန်ကုန်ပြီး Instagram အောင်မြင်မှု၏အထွscale်အထိပ်ကိုချိန်လိုပါကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ Instagram မြင်သာမှုကိုလျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်စေသောပရိုဂရမ်များအတွက်စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည် Instagram နောက်လိုက်များကိုအခမဲ့ရရှိပြီးလျှင်မြန်စွာကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်များအဖြစ်ကောင်းစွာကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဗားရှင်းပေးဆောင်ပါပြီ။ ငွေပေးချေသူများသည်သင်ရလဒ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်စေနိုင်သော်လည်းအခမဲ့ဗားရှင်းများကိုလည်း သုံး၍ သင်အောင်မြင်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များအနက်အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ bot များပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရရှိထားသောနောက်လိုက်အသစ်များအားလုံးသည်စစ်မှန်သော Instagram သုံးစွဲသူများဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအစီအစဉ်အတွက် sign up လုပ်ပြီးသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို online မှာသုံးခွင့်ပြုထားတာလဲ။
ဂုဏ်ယူစွာ 500,000+ Instagram ကိုအသုံးပြုသူများအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်
TurboMedia သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram စာမျက်နှာကိုမည်သူထက်မဆိုမြန်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် TurboMedia ကို ၂ နှစ်ကြာအသုံးပြုနေပြီးကျွန်ုပ်ရရှိသောငွေထက်များစွာကြီးထွားလာသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် Blog ရေးသားချက်များ
29th ဇွန်လ 2022
အကြီးမားဆုံး Influencer စျေးကွက်ရှာဖွေရေး စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အကြံပြုချက်များ
Instagram သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အချိန်မရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် influencer marketing ကပေးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေပေမဲ့...
22nd ဇွန်လ 2022
Instagram တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် SEO နည်းပညာများ
လစဉ်တက်ကြွအသုံးပြုသူတစ်ဘီလီယံကျော်နှင့်အတူ Instagram သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် အစွမ်းထက်ဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
13th ဇွန်လ 2022
Instagram စျေးဝယ်ကြော်ငြာများတွင် သင့်ထုတ်ကုန်များကို မှန်ကန်စွာစာရင်းသွင်းရန် အကြံပြုချက်များ
အွန်လိုင်းရှော့ပင်သည် စံနမူနာအသစ်ဖြစ်လာသည်။ အဝတ်အစားမှသည် ကုန်စုံဆိုင်အထိ၊ အရာအားလုံးကို အွန်လိုင်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်သည်။ စျေးကွက်ဖြစ်လာသောပလပ်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခု...
TurboMedia သည်စီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင် Instagram အကောင့်များအတွက်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖြေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏အွန်လိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်နောက်လိုက်များ၊ အကြိုက်များ၊ အမြင်များနှင့်မှတ်ချက်များပိုမိုရရှိရန်ကူညီသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2022 TurboMedia (turbomedia.io) ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ ရွာေဖြလမ္းညႊန္
လတ်ဆတ်သောအကြောင်းအရာအတွက် အလွန်ဟောင်းသော Instagram ပို့စ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းများ
သင်၏ Instagram ဇာတ်လမ်းများတွင် သင့်လင့်ခ်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
မူပိုင်ခွင့်© 2020 TurboMedia (turbomedia.io) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရန်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်က cookies များကိုအသုံးပြုသည်